भुवनको निरन्तर ३७ वर्षे यात्रा… « THE CINEMA TIMES
‘लप्पन छप्पन’ निर्देशकको एक्सन सिनेमामा पुष्प फाइनल
‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’को दोस्रो टिजर सार्वजनिक
‘भाँडाकुटी’मा मुकुन र बेनिशाको जोडी
५७ वर्षमा ‘आमा’ !
‘श्री’ फस्टलुक पोस्टर रिलिज
नारायण त्रिपाठीको ‘द ससुरो’ फस्टलुक पोस्टर रिलिज
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – बि.स. २००८ सालमा नेपाली भाषाको पहिलो सिनेमा ‘सत्य हरिशचन्द्र’ प्रदर्शनमा आयो । त्यसको झन्डै १४ वर्षपछि नेपालमै निर्माण भएको ‘आमा’ रिलिज भयो । १४ वर्षको अन्तरालमा नेपाली भाषामा निर्माण भएको ‘आमा’ नै दोस्रो सिनेमा थियो ।
त्यसपछि ३-४ वर्षको अन्तरालमा एउटा-एउटा सिनेमा रिलिज हुन् थाले । ‘सत्य हरिशचन्द्र’ रिलिज भएको ३१ वर्षसम्म नेपालमा १२ ओटा सिनेमा मात्र रिलिज भएका थिए । २०४० सालको बैशाख १ गते रिलिज भएको १३ औँ सिनेमा ‘जुनी’बाट सदाबहार अभिनेता भुवन केसीले डेब्यु गरे ।
नेपाली सिनेमामा अमुल्य ३७ वर्ष योगदान दिइसकेका भुवन अहिले पनि सक्रिय छन् । एक-से-एक सफल सिनेमा दिएका भुवनको आज विश्वकर्मा पूजाको दिन जन्मदिन परेको छ । २०१५ सालमा जन्मिएका भुवन ६२ लागेका छन् ।
इतिहास केलाउदा भुवन नेपाली सिनेमाका अब्बल अभिनेताको रुपमा अग्रपंतिमा आउछन । उनि कम तर स्तरीय सिनेमा गर्ने अभिनेताको रुपमा पनि चिनिन्छन ।
रोमान्टिक हिरोको छवि बनाएका भुवन पछिल्लो समय सिनेमा निर्माण र निर्देशनमा जमेका छन् । सन् २०१६ मा आफ्नै छोरा अनमोल केसी अभिनित सिनेमा ‘ड्रिम्स’बाट निर्देशनमा हात हालेका भुवन होमप्रोडक्सनको ‘पारस’ र ‘एन्टीहिरो’को तयारीमा छन् ।
भुवनले आफ्नो करिअरमा ‘कुसुमे रुमाल’, ‘सम्झना’, ‘साइनो’, ‘कन्यादान’, ‘चिनो’, ‘टुहुरो’, ‘दक्षिणा’, ‘नाता’, ‘राँको’, ‘करोडपति’, ‘नेपाली बाबु’, ‘सुपरस्टार’, ‘बादलपारी’, ‘जिद्दी’, ‘बाबुसाहेब’, ‘म तिमि बिना मरिहाल्छु’ लगायतका सिनेमा अभिनय गरेका छन् ।
भुवन अभिनित पछिल्लो सिनेमा ‘मिस्टर नेपाली’ थियो । तर, यो सिनेमा बक्सअफिसमा सफल हुन सकेन ।
भुवनले आफ्नो करिअर एक गायकको रुपमा अगाडी बढाएका थिए । सिनेमा डेब्यु अगाडी नै ‘मायालु तिमि टाढा’ बोलको गीत रेकर्ड गराएका भुवन नेपाली म्युजिक भिडियोका पहिलो मोडलसमेत हुन् ।
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – कोरोनाले ठप्प नेपाली सिनेमा क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्दैछ । सरकारले
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – मल्टीस्टारर सिनेमा ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’को दोस्रो टिजर सार्वजनिक गरिएको
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – सिनेमा ‘भाँडाकुटी’ बन्ने भएको छ । घटस्थापनाको अवसरमा शनिबार राजधानीमा
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – कोरोना संक्रमणका कारण नेपालका पहिलो सिनेम्याटोग्राफर बैकुण्ठमान मास्केको निधन भएको छ
Shilpa Pokhrel plays the lead in Karishma's 'FAGU' (with photo/video)
कथा नै हाम्रो मेरूदण्ड हो: दीपेन्द्र लामा
'श्रीमद्भगवत् गीता'को सिरिज निर्माण गर्दै नीता